Adeegyada maktabadda ayaa kaa caawinaya inaad guuleysato »Jaamacadda Hodges
Ku soo dhowow maktabadda jaamacadda Hodges
Si looga caawiyo buuxinta baahiyahaaga, Maktabadda Terry P. McMahan waxay siisaa adeegyo iyo qalab kala duwan ardayda Jaamacadda Hodges, macallimiinta, shaqaalaha, iyo ardayda ka qalin jabisay.
Waxaan kuu fududeyneynaa inaad hesho macluumaadka aad u baahan tahay. La xiriir khabiir takhasus leh si uu kuugu hago cilmi-baarista, u hel meel aad keligaa wax ku baratid ama koox kula noqoto, oo ka hel buugaag, maqaallo, iyo inbadan oo ka taageeraya khibraddaada waxbarasho. Booqasho ku joogso! Waxaan halkaan u nimid inaan caawino.
Ka raadi maktabadda macluumaadka, maqaallada, joornaalada, buugaagta, buugaagta elektarooniga ah, filimada, dukumiintiyada dowladda, iyo inbadan oo ka mid ah aruurinta ilaha tacliinta ee takhasuska leh. Waxyaabo badan ayaa isla markiiba laga heli karaa internetka. Qalabka jirka badankood waxay fiiriyaan 3-4 toddobaad waxayna cusbooneysiiyaan 2 jeer. Amaahda maktabadda isku-xidhka ahi waxay noo oggolaaneysaa inaan helno agab dheeri ah oo laga helo ururinta waddanka ka jirta.
Soo Gal E-Library